ရှရ်ဟ် အလ်-အကီးဒဟ် အလ်-သွဟာဝီးယားဟ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် စ-ဆုံး) | Ko Rohingya
ဟိဂ်ျရီသက္ကရာဇ် ၂၃၉ ခုနှစ် (ခရစ်သက္ကရာဇ် ၈၄၃ ခုနှစ် သို့မဟုတ် ၈၅၃ ခုနှစ်)မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အီမာမ်သွဟာဝီ(ရဟ်မသုလ္လာဟိအလိုင်းဟ်)သခင် စီရင်ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ အကီးဒဟ် အလ်-သွဟာဝီးယားဟ်လို့ ကျော်ကြားတဲ့ အကီးဒဟ် အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက် စာတမ်းငယ်လေးကို အစ္စလာမ့်ပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အီမာမ်အလီဗင်န်အလီဗင်န်အလီ အလ်-အိဇ်ဇ် အလ်-ဒိမတ်ရ်ှကီ(ရဟ်မသုလ္လာဟိအလိုင်းဟ်)သခင်က အကျယ်ဖွင့်ဆိုရေးသားထားတဲ့ ကျမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအကျယ်ဖွင့် ရှရ်ဟ်ကျမ်းကို အာရဗီနှင့် အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာစလုံးကို တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ပါရဂူဘွဲ့ရပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Professor Dr Muhammad ‘Abdul Haqq Ansari က အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံရှိ အလ်-အီမာမ် မုဟမ္မဒ် အိဗ်နု စအူးဒ် တက္ကသိုလ်ကြီးကနေပြီး ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာပေတတ်ကျွမ်းကြကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ်မွန်အပေါင်း လေ့လာနိုင်ရန် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ထို့ပြင် အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက် အကီးဒဟ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်ကောင်းအချို့ကိုလည်း အောက်ပါလင့်ခ်ကို နှိပ်၍ ယင်းစာမျှက်နှာသို့ သွားကာ မိမိဖတ်ရှုချင်သော စာအုပ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူ၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ် သုံးပါးစလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။ အာမီးန်။
This entry was posted on February 16, 2013, in ဘာသာရေး, အကီဒဟ်ယုံကြည်ချက်, အစ္စလာမ်, အစ္စလာမ် and tagged ကမာန်, ချမ်းမြေ့, ပန်းသေး, ပသီ, ပသျှူး, မွတ်စလင်မ်, ရိုဟင်ဂျာ, အကီဒဟ်, အစ္စလာမ်, အာရဗီ, အီမာမ်သွဟာဝီ, မြန်မာ, Professor Dr Muhammad 'Abdul Haqq Ansari. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကိုခင်မောင်ရီစိန်နှင့် စကားပြောခြင်း (၁)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျူးကျော်စော်ကားတဲ့ Thway Thit Sar ခေါ် စစ်အာဏာရှင်လက်ပါးစေတစ်ဦးအား ချေမှုန်းခြင်း →